Macdanta. 🥇 Sidee Loo Ciyaaraa Macdanta. Emulator.online
Macdanta. Waxaa la abuuray sagaal iyo sagaal iyo sideetan iyo sagaal, Minefield wuxuu u yimid Windows soddon iyo kow kaliya sagaashan iyo labaatan walina wuxuu ka yaabiyaa ciyaartoy badan maanta. Iskuxirkiisu wuu is badalay wax badan sanadihii la soo dhaafay, laakiin makaanikada ciyaarta wali wey sii jirtaa. Waxaan sharad ku galay inay tani dhab ahaan tahay waxa aad xiisaynayso: maaddaama waayo-aragnimadaadii hore aysan kuu keenin natiijooyin aad u wanaagsan, waxaad jeclaan lahayd inaad si faahfaahsan u fahanto sida loogu ciyaaro Minesweeper.
Waa mid ka mid ah ciyaarahaas qof walba, ugu yaraan hal jeer noloshiisa, ciyaaray. Waxaa lagu soo daray ficil ahaan dhammaan noocyada Windows illaa siddeed, markii Microsoft ay go'aansatay inay tirtirto sidoo kale Lonely iyo hiwaayadaha kale ee horay loogu sii rakibay nidaamkaaga qalliinka sannadihii la soo dhaafay. Qaarkood sidoo kale waxay ugu yeeraan goob miinoXaqiiqdii, tani waa kala duwanaanshaha ciyaarta (siyaasad ahaan ku habboon) ciyaarta lagu soo bandhigay Windows XNUMX oo soo bandhigtay wax ka yar ama ka yar isla saxda.
Xaqiiqdii, casharka maanta, waxaan ku sharaxayaa sida loo helo iyo sida loogu ciyaaro Minefield anigoo ka hadlaya nooca ugu dambeeya ee Minefield oo bilaash ah dukaanka Windows XNUMX, oo waliba taabasho taabasho leh. oo waxaad kula xiriiri kartaa Xbox Live si aad ula wadaagto horumarkaaga. Iskuday waxaanan kuu xaqiijinayaa inaadan ka qoomameyn doonin! Haddii runti aadan ku qanacsanayn, ma joojin doono inaan ku siiyo fursado kale oo ku habboon oo aad ku heli karto kombuyuutarkaaga, taleefannada casriga ah iyo kan kiniiniga ah. Akhris wanaagsan iyo waxa ka sarreeya, ku raaxayso!
Macdanta Miinada | Minesweeper Online
Nooca ugu dambeeya ee ciyaarta ay soo saartay Microsoft waxaa jira 2 qaab oo la heli karo: taas caadi ah, oo si aaminnimo leh u soo saarta astaamaha Prato fiorito, iyo taas quudhin taas oo, dhinaca kale, soo bandhigaysa waxyaabo cusub. Aynu ku bilowno midka koowaad, markaa waad akhridaa hagehan.
En Habka miinada dhaqanka waxaa jira shabakad ah sanduuqyada daboolan, kaas oo matalaya aagagga ay miinooyinka lagu qarin karo: si aad ugu guuleysato, waa inaad masaxdid goob kasta oo bannaan oo madhan waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Noocani, halkii aad kaheli laheyd miinooyinka, waxaad kaheli doontaa marwada, laakiin qalliinku isma beddelo. Ka reebida fagaarayaasha adigoo gujinaya (ama qasabad), waxaad calaamadeyn kartaa kuwa aad u maleyneyso inay qarinayaan miino oo aad xannibi karto, si aadan u qarxin.
Mid baa dhejin kara calanka casaanka sanduuqyadan adigoo gujinaya midigta jiirka ama taabasho dheer: ku celcelinta ficilkan, halkii aad ka heli lahayd calammada, a calaamadda su'aal jaalle ah kaas oo "furi doona" foornooyinka la doortay oo aad sii dayn doonto. Si aad u guuleysato, waa inaad ka saartaa mid kasta iyo afargeesle kasta oo aan ku jirin miinooyinka, adigoon qarxin hal miino.
Waxaa jira 3 heerar kakanaanta oo laga kala xusho: bilawga, dhexdhexaad ah y horumarsan. Si loo kala saaro waa tirada laba jibbaaran iyo macdanta ee shabakadda: sagaal × sagaal laba jibbaaran oo leh toban miino kan hore, lix iyo toban × lix iyo toban leh afartan kan labaad iyo soddon × lix iyo sagaal iyo sagaashan iyo sagaal. Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad la ciyaarto heer grids caadadii, halka laga xusho imisa sanduuq inay ku jiraan altura, ballaaran iyo tirada miinooyinka ama Coccinelle. Siddeed × sideedii ugu horreysay kala duwanaanshaha miinada hadda xor ma aha.
Inta badan sanduuqyada bilaashka ahi way madhan yihiin, laakiin qaarkood waxay leeyihiin a lambar 1 ilaa 6: waa tilmaamo qiimo leh, maaddaama ay tilmaamayaan inta miino ee aaggaas ku jirta. Waxaa la doorbidaa in la tirtiro sanduuqyada ku xiga kuwa aan lambar ku lahayn gudaha oo loo calaamadiyo inay "khatar yihiin" kuwa ku xiga shan ama lix. Tan waxaa u sii dheer, waa inaad ku tiirsanaataa nasiibkaaga, maadaama aysan jirin talooyin kale ama tabo kale oo gaar ah oo aad ku guuleysato Minefield. Waa ciyaar xujo runtii fiican!
Qaabka quudhin Waa sheeko xiiso leh oo loo arki karo inay tahay ciyaar gebi ahaanba ka duwan sidii hore, in kasta oo ay haysay waxyaabo gaar ah oo ka mid ah miin-gooye dhaqameedka. Halkan, macdanta ayaa ka ciyaareysa doorka maraya marinnada taxanaha ah ee isku dhafan (mid kasta oo matalaya heer), qodidda sanduuqyada jidka. Halkii laga heli lahaa miinooyinka, dabinnada waa la qariyey: waxaad ku bilaabaneysaa nolosha 3 waxaadna kasban kartaa wax badan adoo urursanaya qalbiyada. Shilimaadku waxay kordhiyaan dhibcaha.
Qaabka tacaburka ayaa ka "jahwareer yar" midka dhaqameed, waxaana ugu wacan xaqiiqda haddii aad dabin hesho wali waxaad heysataa 2 fursadood oo kale oo aad ku buuxiso heerka. Joogitaanka lacagta birta ah iyo walxaha kale ee iskudhafka ah si loo furo albaabbada dhaladaquudhin) wuxuu ka dhigayaa khibrada ciyaarta mid lagu qanci karo: sanduuqyada la furayo marwalba waxay ka koobnaan karaan lambar aqoonsi oo ah dabinada u dhow mashiinada ayaa si sax ah u la mid ah sidii hore loo sharaxay.
Marka lagu daro shilimaadka, macdanta ayaa aruurin kara dibi dahab ah y armas dil dadka kaa soo horjeeda oo burburi dabinada wadadaada: mid kasta oo ka mid ah ficiladan waxay gacan ka geystaan ​​kordhinta dhibcaha ciyaarta. Ma jiraan calammo ama calaamado su'aal, laakiin waxaa jira calaamado guduudan iyo cadaan leh a astaanta kalgacalka, kuwaas oo si sax ah isku ujeedo leh isla markaana lagu dhaqaajiyo midig midig ama taabasho dheer.
Midka cusubi kuma ekayn halkan, maaddaama Minefield ay hadda sidoo kale bixiso qaar caqabadaha maalinlaha ah Waxay ku saleysan yihiin qaabka dhaqameed ee qumman oo aan kuu oggolaaneyno inaad kor u qaaddo hoggaanka billaha ah ee gunnooyinka lagu bixin karo ciyaarta. Caqabadahaan maalinlaha ah waxaa laga heli karaa bogga ugu muhiimsan ee ciyaarta waxaana loo soo jeediyay in la buuxiyo ficilo kala duwan: inaad u adeegto tusaale ahaan, hal caqabadood waxaa laga yaabaa inaad ku calaamadeysid toban miino oo leh calammo (adigoon sii deynin sanduuq kasta) iyo mid kale si aad ugu talaabsato miinooyinka.
Caqabadaha waxay siinayaan 4 gaashaan oo naxaas ah, qalin, dahab iyo dheeman, iyadoo kuxiran horumarka bil kasta. Heerka kakanaanta ayaa ka tarjumaya midka qaabka caadiga ah - waad ka gudbi kartaa caqabad bilow ah, dhexdhexaad ah ama khabiir.
Marka lagu daro abaalmarinta gaarka ah, oo marka hore tixraacaysa nooca ciyaarta (oo aan wax yar ka hadli doono), ujeedku waa in la gaaro yoolalka Xbox Live
Haa, waad aqrisay sax! Minefield laguma ciyaari karo qunsuliyadaha Microsoft, laakiin waxaad ku kasban kartaa dhibco koontadaada Xbox Live! Hadda, si kastaba ha noqotee, hadalka ku filan: waxaa la gaadhay waqtigii la fahmi lahaa sida loo rakibo Minesweeper kombiyuutarkaaga.
Hadda waxaan qeexayaa qaar Beddelka goobta miinada inaad ka doorato haddii aadan ku qanacsanayn Microsoft Minesweeper.
Macdanta: Waxyaabaha Muhiimka ah (Windows XNUMX)
Xulashada ugu horeysa ee aan soo jeedinayo ayaa ah Miinada: waxyaabaha lagama maarmaanka ah, barnaamij bilaash ah oo aad kaheli karto Windows XNUMX dukaankiisa rasmiga ah oo aad rakibi karto adigoo gujinaya badhanka hel. Ma jiraan wax iibsi ama xayeysiisyo dheeri ah dhammaan cayaaraha. Si kastaba ha noqotee, hab Adventure ah ayaa maqan. Waa cawska ubax-dhaqameedka ee leh 3 heerar isku-dhafan oo horay loo sii caddeeyay iyo mid la waafajiyay.
Qiyaasaha shabakadaha iyo tirada miinooyinka heer kasta waa caadi, sidaa darteed, waxay la mid yihiin kuwa ku yaal Minefield ee Microsoft. Kala-soocidda shabakadda ayaa sidoo kale si isku mid ah u bixisa qiimayaal isku mid ah: magacyada ayaa is beddelaya, iyadoo ay ugu wacan tahay xaqiiqda halkan aad ku kala dooran karto hababka fudud, warbaahinta ama difícil. gudaha doorashooyinka Waxaad ka heli doontaa 3 mawduuc si aad u habeysid sawirada ciyaarta iyo kontaroolada qaarkood ee la xiriira saacadaha, dhawaaqyada iyo calaamadaha su'aalaha badan. Runtii waa lama huraan sida cinwaanku ballanqaaday.
Miinadan miinadu waxay bixisaa nidaam ah tirakoob dhibcaha laga gaaray ciyaaraha, laakiin kuma xirmi kartid Xbox Live si aad ula wadaagto asxaabta: haddii aad si fudud u rabto inaad ku ciyaarto Prato Fiorito, uma maleynayo inay tani dhibaato noqon karto. Ku saabsan makaanikada ciyaarta, dhaqdhaqaaqyadu waxay la mid yihiin kuwa ciyaarta Microsoft: dhagsii ama taabasho si loo sii daayo sanduuqyada, dhagsig midig ama taabasho dheer si loo calaamadeeyo. Fudud, miyaanay sidan ahayn? Sawirada ayaa sidoo kale runtii quruxsan.
Macdanta! (Windows toban)
Xulashada labaad ee kale ee aan kuu soo jeedinayo, Macdanta!Waxay ku habboon tahay miinada dhabta ah ee nostalgic. Sawiradu si sax ah ugama fiicna, laakiin ciyaarta ayaa soo saareysa astaamaha asalka u ah Windows: had iyo jeer iyo xaalad kasta waxaad ka heli kartaa Dukaanka Microsoft.
Waxaa jira 4 shabakadood (had iyo jeer iyo xaalad kasta oo loo qaybiyay heerka kakanaanta), taasi waa fudud, dhexdhexaad, difícil y qarow. Halkan ma jiraan wax suurtagal ah oo lagu qaabeyn karo cabirka iyo tirada sanduuqyada la sii deynayo aad iyo aad ayey uga duwan yihiin heerarka.
Qaab fudud oo fudud, shabakadu waa siddeed × sagaal laba jibbaaran oo leh toban miino; bartamaha 10x12 oo leh labaatan miino; si Caddaalad ah u adag laba iyo toban teen afar iyo toban soddon miino iyo Qarow saddex iyo toban × shan iyo toban leh afartan miino. Farsamooyinka ciyaarta waa aasaasi: guji ama taabasho kasta waxay sii deyneysaa sanduuqa la xiriira, iyadoon awoodin inay calaamadeyso tuhmanayaasha. Ciyaarta waxaa loo tarjumay af Talyaani, laakiin dejinta Waxa kale oo aad beddeli kartaa luqadda ama asalka daaqadda: si aad u hesho, si fudud u riix astaanta qolka kaasoo ku yaal xarunta hoose.
Haddii aad isticmaasho Mac, waxaad ku ciyaari kartaa Minefield adigoo ku dhejinaya barnaamijka bilaashka ah ee isla magaca ah Mac App Store, oo aad ku rakibi karto adigoo riixaya badhanka Hel / Ku rakib, oo ku yaal qaybta midig ee sare isla markaana lafteeda xaqiijinaysa, haddii loo baahdo password Aqoonsigaaga Apple ama Aqoonsiga dokumentiga (haddii Mac-gaagu leeyahay dareeraha faraha).
Ciyaartu waxay la mid tahay sida miinada dhaqameed, oo leh qaab toban × laba iyo toban iyo labaatan miino. Si aad u hagaajiso goobaha ciyaarta, waa inaad riixdaa astaanta qolka oo ku yaal xarunta hoose oo xulo qodobka dejinta ka menu ee furitaanka.
Sida loogu ciyaaro Online Minepweeper
Ku ciyaarida Minesweeper adoo ku rakibaya barnaamij kumbuyuutarkaaga waa mid aad u fudud, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan dareemin inaad qaadanaysid meel disk ah ciyaartaas. Marka maxaad toos ugu ciyaari weyday khadka tooska ah? Websaydhka waxaa ku yaal goobo fara badan oo kuu oggolaanaya inaad sameyso: mid ka mid ah ayaa ah Macdanta laga qodo khadka tooska ah kaas oo sidoo kale leh nooc lacag ah oo ku jira App Store. Tan waxaan kuugu soo qaadayaa xaqiiqda ah inay leedahay isla sawirada iyo kontaroolada saxda ah ee miinada asalka u ah Windows.
Meeshu waa Ingiriis, laakiin uma baahnid inaad taqaanid luqadda si aad ugu ciyaari karto. Shabakadaha waxay leeyihiin cabirka caadiga ah ee Microsoft Minesweeper: adoo gujinaya juego, oo ku yaalo bidixda kore, waxaad kala dooran kartaa bilawga, dhexdhexaad ah y khabiir, taas oo u dhiganta bilowga, dhexe iyo khabiirka. caado waxaa loogu talagalay habka ugu habboon ee loo habeeyey, halkaas oo aad ka dhigi karto altura (Dhererka) ballaaran (Width) iyo sidoo kale miinooyinka (Anigaa iska leh). Calaamadeynta a noocyada boggaaga, u oggolow calaamadda su'aasha.
Makaanikyada ciyaarta ayaa fiirinaya guji bidix si ay u sii daayaan labajibbaaranaha iyo midigta si ay u calaamadeeyaan: gujinta xakamaynta Arag soo koobida kumbuyuutarkaaga gaabiskiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa. Ikhtiyaarku waa mid xiiso leh aragtida taasi waxay kuu oggolaanaysaa inaad qiyaasto ama ka fogaato shabakadda boqol boqolkiiba illaa laba boqol boqolkiiba.
Habeenki Habeenki bedelkeeda, beddel asalka goobta oo yaree dhalaalka daaqadda si loo kaydiyo tamarta habeenkii oo dhan.
Hagaag, waan kuu sharaxay sida loogu ciyaaro Minefield kombiyuutarka iyo khadka tooska ah, laakiin haddii aad rabto inaad ka sameyso telefoonka gacanta ama kiniin? Ha welwelin: waxaa jira barnaamijyo badan oo bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad ku ciyaarto Android iyo iOS sidoo kale. Qaarkood waxay leeyihiin baararka dayactirka!
Miin-baare: Ururiyaha (Android / iOS): Kala duwanaanshaha miinada dhaqameed ee, marka laga reebo haysashada shabakado qaabab ah oo aan ka ahayn laba jibbaaran ama leydilo, waxaa ku jira heerar iyo uruurinno.
Globesweeper (Android / iOS) - ma ka daashay baararka laba-geesoodka ah? Codsigan waxaad ku ciyaari kartaa qaybaha iyo xabadaha. Kala duwanaanshaha Minefield gebi ahaanba tijaabada.
Dunida miinooyinka (Android / iOS) - ku wareeji miinooyinka khariidadaha waddamada meeraha leh kala duwanaanshaha miinadaas oo kugu martiqaadaya inaad dib u eegto joqraafiga.
Sida loo rakibo Minefield Windows 10
Waxaan bartay ciyaarta, waa waqtigii aan sharxi lahaa Sida loo rakibo Minefield Windows 10. Cayaartu waa bilaash dukaanka nidaamka qalliinka ee Microsoft, sidaa darteed waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku riixdo badhanka buluugga ah qoraalka hel bogga rasmiga ah ee Microsoft Minesweeper.
Codsiga, sidaan horeba u soo sheegnay, waa bilaash, laakiin waxaa jira waxyaabo lacag bixin ah oo caawimaad leh oo la furi karo ka dib rakibidda: waad iska qori kartaa a rukhsadda caymiska hal bil oo ah boqol iyo afartan iyo sagaal euro ama hal sano oo ah sagaal.89 euro. Nasiib darrose, ciyaartu waxay ka kooban tahay boodhadhyo si teel teel ah ayay kuu qasbeysaa inaad daawato fiidyowyo xayeysiin ah oo ilbiriqsiyo ah oo aadan tirtiri karin. Xalka kaliya ee aad u baahan tahay inaad dhaafto waa inaad iska qorto. Faa'iidooyinka kale ee rukunka waa lacagta birta ah (taas oo loogu talagalay caqabadaha) iyo waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay habka ugu fiican ee Adventure.
Intaas markaan idhi, aan talaabo qaadno! Soo dejintu way dhammaatay, bilow Microsoft Minesweeper iyada oo loo marayo astaanta ay ku qoran tahay liiska bilowga sidoo kale bilaw ciyaar ka Habka caadiga ah ama ku jira Qaab nololeed, ka dibna riixaya sanduuqyada ku habboon heerka la doonayo ee kakanaanta: bilawga, dhexdhexaad ah ama khabiir.
Daaqadda weyn ee Minefield, oo lagu ballaarin karo shaashad buuxda iyada oo loo marayo astaanta leh labada fallaadhood ee midigta kore, ayaa si duuduub ah ugu duuban: adoo u rogaya dhanka bidix, waxaad ka heli kartaa tirakoob ku saabsan ciyaaraha iyo yoolalka Xbox Live ee la gaadhay. Waad guuri kartaa mawduucyada kaliya nooca lacagta lagu bixiyo: qaabka aasaasiga ah midka kaliya ayaa u muuqda.
Si kastaba ha noqotee, si loo helo qaabeynta miinada, waa inaad gujisaa astaanta bidix ee kore oo aad doorataa qodobka dejinta laga bilaabo menu-ka laguu soo jeediyay: tani waxay fureysaa dhinac dhinac ah oo aad ku hagaajin karto kan xulashooyinka ciyaarta.
Waad hagaajin kartaa mugga oo aad kicin kartaa ama joojin kartaa digniinta, halka aad isla markiiba dooran karto haddii aad rabto iyo in kale calaamadaha su’aasha. Haddii kumbuyuutarkaagu kuu oggolaado, sidoo kale waad la qabsan kartaa taabasho iyo sawirada waxaadna dhaqaajin kartaa isbedelka hab dhakhso leh iyo / ama amarrada barakac. Ugu dambeyntii, waxaad dooran kartaa inaad soo celiso dejimaha dejinta caadiga ah ama dib u dejiso tirakoobka ciyaarta.
Muuqaalka ugu dambeeya ee aan jeclaan lahaa inaan fiiro gaar ah u yeesho. Xbox Live- Haddii aad horay u diiwaangashatay xog xaqiiqda ah inaad haysato qalabka loo yaqaan 'Xbox console', uma baahnid inaad wax qabato oo markii aad dhammaato, waxaa lagugu wargalin doonaa desktop-ka. Haddii aadan wali lahayn xisaab, kugula talin maayo inaad diiwaangeliso maadaama aan abaalmarin la siin doonin.